Goor mey hakan doontaa Murugada Tahriibku? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Goor mey hakan doontaa Murugada Tahriibku?
Goor mey hakan doontaa Murugada Tahriibku?
C / fataax Cabsiiye Du’aake ayaa lagu wargaliyay geerida walaashiis Caasha oo ay ku dhimatey gacanta Magafiyaash Liibiya todobaad un kadib markii uu bixiyay $9,000 oo madax furasho ah oo uu ka soo ururiyey eheladiisa dibada.
Caasha, oo ah hooyo keligeed haysata saddex carruur ah oo walaalkeed kula noolayd magaalada Laascaanood ee waqooyiga Soomaaliya, ayaa la waayey 7dii Janaayo.
Waxay timid Liibiya, halkaas oo qoyskeeda laga soo wacay 11 maalmood ka dib markay ka tagtay Soomaaliya Waxay marwalba igula talin jirtay socdaalka sharci darada ah.
Ma garanayo waxa ku wargeliyay go’aankeeda, ”ayuu yiri C / fataax oo weli murugaysan Cabdifataax wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in walaashiis ay la xiriirtay lix jeer intii ay ku jirtay gacanta tahriibiyeyaasha Liibiya.
Markii ugu dambeysay ee uu taleefan kula hadlo 18-kii Febraayo, waxay umuuqatay mid itaal daran oo hadli karin. Markii dambe ayaa muqalasiin ay u soo direen fiidiyoow ay ugu soo direen WhatsApp iyagoo ku leh way huruddaa.
Haatan wuxuu u maleynayaa in fiidiyowga uu helay uu muujinayo meydka Caasha, Walaacayaga ugu weyn qoys ahaan hadda waa iyada oo aan weli la aasin.
Meydkeedu wuxuu jiifaa meel ka mid ah Liibiya, ”ayuu yiri C / fataax oo aan weli ku guuleysan inuu si sax ah u ogaado halka lagu qabtay,
Mukhalasiinta ayaa dalbaday $ 2,000 oo dheeri ah si loogu aaso.
Geerida Caasha waxaa u xaqiijiyay Cabdifataax muhaajiriin kale, oo la siidaayay kadib markii qoyskiisa ay bixiyeen madax furasho Cabdifataax wuxuu xusay in kabadan 20 dhalinyaro ah oo uu ogyahay inay kasoo haajireen Laascaanood.
Wuxuu maqlay in labo kamid ah ay ku dhinteen Libya intii ay xirnaayeen, Sida uu ogyahay, walaashiis iyo laba kale oo ka soo raacday tuulada Jaama-Laaye ee Laascaanood waxay sii mareen Itoobiya iyo Suudaan iyagoo ku sii jeeda Libya.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa kusoo kordhay Tahriibka dhalinyarada, gaar ahaan inta udhaxeysa 14 ilaa 20, tan iyo bilowgii sanadka.
Faadumo Jaamac oo deggan Lasanod wiilkeeda oo 17 jir ah ayaa la waayey in ka badan bil ka hor. Waxaa lagala soo xiriiray Libya dadka wax tahriibiya, waxayna ka codsadeen $11,000 oo madax furasho ah.
Waxay Ergo u sheegtay in wiilkeeda Cabdiraxmaan Maxamed si xun loola dhaqmay oo xitaa xabad lagaga dhuftay lugta.
Waxaan la tacaalayaa dhibaato aad u weyn mana ogi cid iga caawin karta. Habeen walba intaanan seexan tahriibiyeyaashu way i soo wacaan, iyagoo ku garaacaya si aan maqlo oohintiisa, ”ayay Faadumo u sheegtay Raadiyo Ergo.
Qofkasta oo raba inuu gaaro Yurub wuxuu jeebkiisa ka bixin jiray giraanta tahriibinta. Laakiin hadda wakiilada tahriibinta maxalliga ah ayaa la soo xiriiraya oo bixinaya lacagta safarka ee ugu horreysa, ka dibna la xiriirta goor dambe qoysaska si ay ugala soo baxaan magdhow si ay ugu beddelaan ilmahooda ama dhallinyarada ehelka ah.
Dadka maxalliga ah waxay xeeladdan cusub u aaneeyeen xaqiiqda ah in xuduudaha uu xiray COVID19, taasoo saameyn ku yeelata ganacsiga tahriibka. Si ay ugu soo laabtaan suuqa, tahriibiyeyaashu waxay adeegsanayeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo u shaqeeya wakiillo si ay ula xiriiraan dhallinta u fidisa lacag ay ku safraan.
Sida ay sheegtay Saynab, waxaa la soo xiriiray tiro hooyooyin ah oo ka codsanaya inay ka caawiyaan raadinta caruurtooda. Waxay ku guuleysteen inay joojiyaan toddobo dhalinyaro ah oo isku dayay inay si dhuumaaleysi ah ku galaan isbaarooyinka Wajaale iyo Tukaraq inta u dhexeysa 25 Janaayo iyo 20 Febraayo.
Waxaa naloo sheegay in la dilayo wiilkeeda haddii ay bixin weydo ugu dambeyn 18-ka Maarso. Qoyska Faadumo waxay ku tiirsan yihiin ninkeeda, kaasoo shaqaale ahaan uga shaqeeya warshadaha dhismaha oo qaata mushahar yar, mana awoodaan inay helaan lacagtaas.
Saynab Ducale Gaad, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka sool ayaa sheegtay in uu jiro hirar cusub oo socdaal ah oo ku socda taatiko cusub oo ay adeegsanayaan dadka wax tahriibiya.
hada waxay diiwaan galisay 30 wiilal iyo gabdho ah, oo ay da`doodu u dhaxayso 14 ilaa 20, kuwaas oo ka soo haajiray Laascaanood ilaa Janaayo 2021.
Tahriibiyeyaashu hadda waxay leeyihiin wakiillo maxalli ah, kuwaas oo dhallinyarada kala xiriiraya baraha bulshada, Waxay bixiyaan qarashka ku baxa safarkooda ilaa Liibiya waxayna qoysaska waydiistaan ​​inay dib ugu soo celiyaan lacagta ribada mar dambe, ”ayay tiri Saynab.
Cabdinaasir ayaa u sheegay weriyaha maxalliga ah ee Raadiyo Ergo in uu la xiriiray wakiil isaga oo sheegaya in uu lambarkiisa ka helay saaxiibkiis Saalim, oo lagu sii daayay Liibiya ka dib markii qoyskiisu ay bixiyeen $12,000 oo madax furasho ah tahriibiyeyaasha.
C / naasir wuxuu sheegay in loo diray lacag dhan $ 30 oo ku jirta akoonkiisa lacagta gacanta oo uu wakiilka u soo diray si uu u caddeeyo in lacagta ‘aysan ahayn wax weyn.
Isha Hiiraan Online.
Previous articleSheikh Xasan Daahir oo Farmaajo Talo wax ku ool ah siiyey ugana digay
Next articleNolosha Magaalada Hargeysa oo dhanka Qudaarta kaga Jaban magaalada Muqdisho
Midowga Africa oo joojiyay xubinnimada dalka Mali ee ururkaas kadib...
Midowga Africa ayaa si kumeel gaar ah u joojiyay xubinnimada dalka Mali ee ururkaas, waxaana tallaabadaas ay jawaab u tahay afgambigiu uu militarigu ku...
Fanaanka Yasin oo Soomali askiisa ah iyo Xubno kale oo...